पर्यटनको सारथि – Rajdhani Daily
अहिले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ शब्दावली ‘हाइलाइट’मा छ । समृद्धिबारे जनचासो बढ्न थालेसँगै एउटा प्रश्न भने पेचिलो भएर आएको छ– के नेपालमा समृद्धि सम्भव छ ? यसबारे अनेक बहस चलिरहँदा समृद्धिको महŒवपूर्ण आधार पर्यटन बन्न सक्ने बहससहित ‘नेपालमा पर्यटन’ पुस्तक बजारमा आएको छ । पर्यटनसम्बन्धी समग्र पक्षको वस्तुपरक विश्लेषण गरिएको पुस्तकबाट विद्यमान पर्यटकीय अवस्थाबारे जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । निर्यात खुम्चँदै र आयात बढ्दै गई मुलुक परनिर्भरतातर्फ धकेलिने खतराबीच जनमानसले समृद्धिको विषय फितलो ठान्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर, पर्यटनको समुचित विकास र व्यवस्थापनले राष्ट्रिय आम्दानीमा क्रान्ति ल्याउन सकिनेसम्मको आशावादिता जगाउन पुस्तक सक्षम देखिन्छ । प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम भण्डार नेपालमा साँच्चै समृद्धि चाहने हो भने पर्यटनलाई आम्दानीको मूल स्रोत बनाउनुको विकल्प नभएको निचोड पुस्तकले निकालेको छ ।खासगरी नेपालमा पर्यटनको सम्भावना कस्तो छ ? यसले कस्ता चुनौती सामना गरिरहनुपरेको छ ? पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धमा राज्यले के–कस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरेका छन् ? पर्यटक आवागमनको वास्तविक स्थिति के
हो ? नेपालको समृद्धिका लागि पर्यटन मूल आधार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्ने पर्यटनको दिगो विकासका निम्ति राज्य र नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? पुस्तक पढिसक्दा यावत् जिज्ञासा मेटिन सक्छ ।
शासक, प्रशासक, नेता, जनप्रतिनिधि, पर्यटन विज्ञ, पर्यटन व्यवसायी, यससम्बद्ध नेतृत्ववर्गका विचार, अनुभव, अनुभूति, प्रतिबद्धता, घोषणा र दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक ढंगले पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । पर्यटनसम्बद्ध बहस, छलफल, कार्यपत्र, तथ्यांक, तर्कलगायतका कारण यो ओजपूर्ण बनेको छ ।
विगतदेखि वर्तमानसम्मको बजेट वक्तव्य र पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध प्रतिबद्धता स्पष्ट ढंगले समेटिनु महŒवपूर्ण पक्ष हो । पर्यटनको दिगो विकासका लागि राज्य हिजो कसरी लाग्यो, आज के गर्दै छ र भोलि कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सवालमा पुस्तकले समीक्षा गरेको छ ।
हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्था केन्द्र भएकाले नेपालमा धार्मिक पर्यटक प्रशस्त भिœयाउन सकिन्छ । पर्यटक तान्न सक्ने ऐतिहासिक र पुराताŒिवक महŒवका ठाउँ पनि यहाँ प्रशस्त छन् । पर्यटक भिœयाउन सकिने आधार प्रशस्त रहे पनि पूर्वाधारसम्बन्धी कमजोरी तथ्यपरक रूपमा केलाउन सक्नु पुस्तकको सबल पक्ष हो ।
कमजोर प्रचारप्रसार र अव्यावहारिक नीति तथा कार्यक्रम पर्यटन क्षेत्रका समस्या हुन्
बन्दहडताल, अपहरण, हिंसा, भेदभावजन्य व्यवहार, प्राकृतिक विपत्ति, कानुनी जटिलतालगायत विविध समस्याका कारण अथाह सम्भानाबीच पर्यटनले अपेक्षित फड्को मार्न सकिरहेको छैन । प्रचारप्रसार र बजारीकरण कमजोर हुनु, नीति तथा कार्यक्रम अव्यावहारिक हुनु पर्यटन क्षेत्रका समस्या हुन् । यस्ता तमाम समस्या समाधानको उपाय सुझाउने महŒवपूर्ण दस्तावेज बनेको छ यो पुस्तक । फलतः नीति निर्माणमा जुट्ने र पर्यटन व्यवसाय लाग्न चाहनेले यसबाट गतिलो खुराक प्राप्त गर्न सक्छन् ।
पर्यटनसम्बन्धी संवैधानिक नीति, लगानीकर्ताको अवस्था, पर्यटनसम्बन्धी ऐननियम, महŒवपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू, होटल–रिसोर्ट–होमस्टेको अवस्था, सडक–हवाई यातायात तथा पदमार्गको अवस्था, जलपर्यटनको सम्भावना, पर्यटकका रुचि–अवश्यकता, सातै प्रदेशको पर्यटन अवस्था, साहसिक पर्यटन विस्तार, पर्यटन विश्वविद्यालयसम्बन्धी अवधारणालगायत नेपालको पर्यटनबारे बहुविध विषय समेटेर उक्त पुस्तकले पाठकलाई पर्यटनसम्बन्धी बृहत् ज्ञान पस्केको छ ।
भाषिक क्लिष्टता र दुरुहताबाट पुस्तकलाई मुक्त राख्दै सरल र सहज भाषाशैलीमा विषयवस्तु पस्कन सक्नु पुस्तकको सबल पक्ष हो । लेखक चिनारीलाई स्थान दिनु राम्रो प्रयोग हो । आवरण, विज्ञापन, तस्बिर, भूमिका, सम्पादकीय, विषयसूची गरी ३८ पृष्ठबाहेक नै मूल सामग्रीलाई ६०६ पृष्ठ छुट्ट्याइएको उक्त पुस्तकको व्यक्तिगत मूल्य ६५० र संस्थागत मूल्य १,००० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
पूर्वनेकपा (एमाले) को केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन विभाग प्रकाशक रहेको यो पुस्तकका सम्पादक तत्कालीन अवस्थामा सोही विभागका प्रमुखसमेत रहेका सूर्य थापा हुन् । प्रकाशक–सम्पादक पार्टीविशेषसँग जोडिएको भए पनि त्यसमा राखिएका लेखरचनाले समग्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि केन्द्रित हुनु आफैंमा सराहनीय पक्ष हो । तथापि, यति धेरै महŒव बोकेको पुस्तक अधिकांशतः पार्टीनिकट व्यक्तिहरूकै घेरामा अल्झिनुलाई कमजोरी मान्न सकिन्छ । अन्य पार्टीका घोषणापत्र, फरक पार्टीका पूर्वपर्यटनमन्त्री, पर्यटनविज्ञका विचार, अनुभव र विश्लेषण समेटिएको भए सुनमा सुगन्ध थपिने थियो ।
जेहोस् मुलुकको समग्र पर्यटन अवस्थालाई समेटेर वस्तुनिष्ठ ढंगले त्यसको विश्लेषण गर्न सक्नु पुस्तकको सफलता हो ।